New York ilaa Madeira. Duulimaddii Tooska Ahayd ee Ugu Horaysay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » New York ilaa Madeira. Duulimaddii Tooska Ahayd ee Ugu Horaysay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • News • Wararka Burburinta Portugal • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Duulimaadyada toddobaadlaha ah ee u dhexeeya New York (JFK) ee ku socda Funchal (FUN) waxaa laga maamuli doonaa SATA Azores Airlines, taasoo u sahlaysa dadka safarka ah ee raadinaya inay sahamiyaan dahabka qarsoon ee Yurub.
1.SATA Azores Airlines, waxay bilaabi doontaa duulimaadkii ugu horreeyay abid oo aan joogsi lahayn oo ka imanaya New York (JFK) ilaa Funchal, Madeira.
2. Ma jiraan wax xannibaad ah oo soo-booqdayaasha si buuxda u talaalan ee ka yimid Mareykanka si ay u booqdaan Jasiiradaha Madeira.
3. Duulimaadka tooska ah ee toddobaadlaha ah wuxuu diyaar noqon doonaa illaa Maarso 2022
Noofambar 29, 2021, Inovtravel oo ay iskaashanayaan SATA Azores Airlines, waxay bilaabi doontaa duulimaad aan joogsi lahayn abid oo ka timaada irid Maraykan ah oo ay ku tagto Funchal, caasimadda Madeira. Iyadoo lala kaashanayo duullimaadka tooska ah ee cusub, oo ka imanaya New York (JFK) kuna socda Funchal (FUN), hawl wadeen dalxiis oo fadhigiisu yahay Portugal Socdaal cusub ayaa bilaabay xirmooyinka safarka cusub ilaa Madeira, oo ay ku jiraan duulimaadyo toos ah oo ka baxaya New York, hoyga, wareejinta garoonka-hoteel iyo khabiir socdaal.
Madeira, oo ah silsilad jasiirad ah oo ku taal xeebta Portugal, shaki la'aan waa dahab qarsoon oo Yurub ah, oo leh muuqaal cajiib ah oo dhan 300 oo mayl laba jibaaran oo buuro ah, dooxooyin iyo xeebo, oo ay la socdaan guryo shan xiddigle ah, maqaayado Michelin-xiddig leh, iyo abaalmarinta Madeiran khamriga. Ma aha oo kaliya, laakiin jasiiradaha waxay ku faantaa xiriir taariikhi ah oo gaar ah oo ay la leedahay Maraykanka, iyada oo magaceeda Madeira loo isticmaalo in lagu dubo ku dhawaaqida madax-bannaanida ee 1776 iyo Thomas Jefferson ayaa lagu eedeeyay inuu dalbaday wax u dhigma 3,500 oo dhalo oo khamri ah Madeira dhowrkii sano ee ugu horeysay. madaxtooyada. Hadda, iyada oo ku habboonaanta xulashooyinka duulimaadka aan joogsiga lahayn, jannadan Boortaqiiska ah ayaa si ka badan waligeed u heli kara socotada Mareykanka.
"Waan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno duulimaadka tooska ah ee ka imaanaya New York ilaa Madeira bishaan November oo aan ballaarinay joogitaankayaga suuqa Mareykanka," ayuu yiri Xoghayaha Gobolka ee Dalxiiska iyo Dhaqanka Madeira, Eduardo Jesus. "Iyadoo ikhtiyaarrada duulimaadka ee laga heli karo meelo kala duwan oo Mareykanka ah, waxaan aad u xiisaynaa inaan ku soo dhaweyno socdaalayaal badan oo Mareykan ah bilaha soo socda jannada Madeira."
Duulimaadka tooska ah ee toddobaadlaha ah ayaa la heli doonaa illaa Maarso 2022 waxaana laga ballansan karaa socotada iyada oo loo marayo Inovtravel.com. Qiimayaashu waxay ka bilowdaan $1,050 safar wareeg ah oo kuraasta dhaqaalaha ah iyo $1,880 safar wareeg ah oo loogu talagalay kuraasta fasalka ganacsiga, oo ay ku jiraan dhammaan canshuuraha. Xirmooyinka safarka ee Innovtravel ee Madeira waxay ka bilowdaan $999 oo ay ku jiraan duulimaadyo.
"Hadafkayagu waa inaan sii wadno bixinta fursado badan oo loogu talagalay dadka safarka ah ee Mareykanka ee raadinaya inay u baxsadaan jasiiradaha yaabka leh ee Madeira iyada oo loo marayo dariiqyo duulimaad oo toos ah oo ku habboon iyo noocyo kala duwan oo xirmo safar ah oo loo habayn karo si ay ugu habboonaato miisaaniyad kasta," ayuu yiri Inovtravel Founder Maamulaha guud ee Luis Nunes.
Jasiiradaha Madeira waxay u furan yihiin dalxiisayaasha Maraykanka, iyada oo aan lahayn wax xaddidaad ah ama shuruudo tijaabo ah oo loogu talagalay socotada si buuxda u tallaalan. Si loo hubiyo badbaadada dadka deegaanka iyo booqdayaasha, dhammaan rakaabka u safraya Madeira waa inay dhammaystiraan a Foomka khadka tooska ah ee Madeira Safe 48 saacadood gudahood ka hor bixitaanka. Dadka safarka ah ee aan si buuxda u talaalin waxay u safri karaan Madeira iyagoo si xun u baara COVID-19 PCR 72 saacadood gudahood ka hor imaatinka, ama inay sameeyaan baadhis COVID-19 oo bilaash ah markay yimaadaan. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shuruudaha gelitaanka Madeira tag BooqoMadeira.pt.